သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီးအား ဂါထာစွမ်းအားနှင့် စီးပွားရေးလာဘ်လာဘပွင့်လာအောင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း – We Love Cele
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီးအား ဂါထာစွမ်းအားနှင့် စီးပွားရေးလာဘ်လာဘပွင့်လာအောင် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နည်း
Posted: July 12, 2018 Under: လူမှု့ဘ၀ By We Love Cele No Comments
သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီးအား ဂါထာစွမ်းအား နှင့် စီးပွားရေး လာဘ် လာဘ ပွင့် လာ အောင်ရွတ် ဖတ် ပူ ဇော် နည်း 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
နံနက် အရုဏ်တက်ချိန် ၅ နာရီ မှ နံနက် (၉)တွင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကြီး အား ရွတ်ဖတ်ရပါမည် ။
ရွတ်ဖတ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်မှာ လူပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလျှင် ကိုယ်လက်သန့်ရှင်းခြင်း ခန္ဓာကိုယ် သန့်ရှင်းခြင်း သန့်ရှင်းသောအဝတ်စားကိုဝတ်ဆင်ခြင်း ရဟန်းမှန်သမျှ ဒေသနာကြားခြင်း ကိစ္စ ကိုဆောင်ရွက်ရပါမည် ။
၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားရည်စူး၍ ဆွမ်း ၉ ပွဲ ရေ ၉ ခွက် ပန်း ၉ ပွင့် ဖယောင်းတိုင် ၉တိုင်ထွန်း အမွှေးတိုင် ၉ တိုင် ထွန်း ၍ ကပ်လှုပူဇော်ရမည်။ ပြီးနောက် ၅ ပါး သီလ တော်ကို ခံယူဆောက်တည်ပါ ။
နတ်များကို ဖိတ်ကြားရပါမည်။ ဖိတ်ကြားပုံမှာ ….
” ကျွန်ုပ်သည် ၅၁၂၀၂၈ ဆူကုန်သော ဗုဒ္ဓ ဘုရားရှင်အပေါင်း အားရည်စူး၍ ရည်မှန်း၍ သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော် မြတ်ကြီးအား ၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်၍ ပူဇော်ကန်တော့မည် ဖြစ်ပါ၍ …အရှေ့နေထွက် အနောက်နေဝင် တောင်မှာတံငါကွန် နက္ခတ် မြောက်မှာ ဓူဝံကြယ် အောက်မှာအဝီစိ အထက်မှာ ဘဝဂ် ဤ အတွင်းမှာ တည်ရှိနေထိုင်ကြကုန်သော အလုံးစုံသော တောစောင့်နတ်များ တောင်စောင့်နတ်
များ ရုက္ခစိုးနတ်များ ဘုမ္မစိုးနတ်များ အာကာသစိုးနတ်များ ကမ္ဘာစောင့်နတ် မြို့စောင့်နတ် နယ်စောင့်နတ် ရွာစောင့်နတ် ရက်ကွက်စောင့်နတ် ကျောင်းစောင့်နတ် မိုးနတ်သား လေနတ်သား ရေနတ်သား လနတ်သား သမ္မာဒေဝနတ်များ သာသနာတော်စောင့်နတ်များ
သူရဿတီ ဒေဝီနှင့် တကွ ဒေဝီ (၇) ပါး ဒေဝီ (၉) ပါး ဒေဝီ (၁၂) ပါး ဓဋ္ဌရဌ ဝိရုဠက ဝိရုပက္ခ ကုဝေရ စသော စတုမဟာ နတိမင်းကြီး ၄ ပါး သိကြားမင်းနှင့်တကွ ၃၃ ကျိတ်သော နတ်မင်း နတ်မြတ် နတ်ဒေဝါ အပေါင်း နှင့်တကွ သူရဿတီ မကြွင်း ခပင်းများစွာ နတ်ဗြဟ္မာ
အပေါင်းတို့ ဖိတ်ကြားပါ၏ ။ ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ ။တရားနာယူရန် ကြွတော်မူုကြပါကုန်လော့ ။ ဤ အချိန်ဤအခါသည်ကား သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်မြတ်အား (၁၀၈) ခေါက်တိတိ ရွတ်ဖတ်မည်ဖြစ်ပါ၍ တရားတော်မြတ်ကို အတူတကွနာယူကြပါရန် ဤနေရာ ဤ ဌာန ဤ အိမ်ဂေဟာသို့ ဖိတ်ကြားပါ၏ ။ ပန်ကြားပါ၏ ။ဖိတ်ခေါ်ပါ၏ ။တရားတော်မြတ် ဂါထာတော်မြတ်ကို နာယူရန် အတွက်ကြွရောက်တော်မူကြပါကုန်လော့ ။ ”
၁၀၈ ခေါက် တိတိ ရွတ်ဖတ်ပြီးပါလျှင် … သမ္ဗုဒ္ဓေသစ္စာ တော် ခံ ဂါထာတော်ကြီး ၏ စီး ပွားရေးလာဘ် လာဘ အဖွင့် … ကို ပြု့ လုပ်ရပါမည်။
သမ္ဗုဒ္ဓေ သစ္စာတော်ခံ ဂါထာတော်ကြီး ၏
စီးပွားရေး လာဘ်လာဘ အဖွင့်
(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှတန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သောကက္ကုဿာန် မြတ်စွာ ဘုရား ကေါဏဂုံ မြတ် စွာဘုရား ကဿဖ မြတ်စွာ ဘုရား ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရား ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် အပေါင်း တို့ သည် ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား ရှင်အ ပေါင်း တို့ သည် …..
(ခ) ဒုက္ခသစ္စာ သ မု ဒ ယ သစ္စာ နိ ရော ဓ သစ္စာ မဂ္ဂသ စ္စာ ဟု့ ဆို အပ် သော လေး ပါး သော သစ္စာတော် တို့ ကို ကိုယ် တော် တိုင် သိ မြင် တော် မူကြ လေ ကုန် ပြီ ။
(ဂ) ဘေး အ မျိူး မျိူး ရန် အသွယ် သွယ် အန္တရာယ် အပေါင်း ရော ဂါ အ ပေါင်း အ နာ အပေါင်း တို့ မှ လျင်မြန် စွာ လွတ် မြောက် တော် မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။
(ဃ) သံ သ ရာ တည်း ဟူ သော ဝဋ္ဋ် ဆင်း ရဲ ဝဋ္ဋ် ဒုက္ခအ ဖြာ ဖြာ တို့ မှ လျင် မြန်စွာ ကျွတ် လွတ် ထွက်မြောက် ကြ ကုန် လေ ပြီ ။
(င) အရဟံ အ စ ဘဂဝါ အဆုံး (၉) ပါး သော ဂုဏ်တော် အပေါင်း တို့နှင့် လည်း ပြည့် စုံ တော် မူကြ လေ ပြီ ။
(စ) ပုဗ္ဗေနိဝါသ ဉာဏ် ၊ ဒိ ဗ္ဗစက္ခ ဉာဏ် ၊ အာသဝက္ခယဉာဏ် သဗ္ဗညုတ ဉာဏ်တော် တည်း ဟူ သောဉာဏ် တော် အ ပေါင်း နှင့် လည်း ပြည့်စုံ တော် မူကြ လေ ပြီ ။
(ဂ) မဂ် လေး ပါး ဖိုရ် လေး ပါး အသင်္ခတ ဓာတ် မြတ်သော နိဗ္ဗာန် ရွှေပြည် မြတ် သို့ လည်း ဝင် စံ တော်မူ ကြ လေ ကုန် ပြီ ။
ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေလာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လားကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေအ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲတ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကားကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော ကကုသံ မြတ်စွာ ဘုရား ကောဏဂုံ မြတ်စွာ ဘုရား ကဿပ မြတ်စွာ ဘုရားဂေါတမ မြတ်စွာ ဘုရား ထို လေး ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ ရှင် ဘု ရား တို့ ၏ တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့် အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိအ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်းတည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သောအ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှတန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော (၂၈) ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် အပေါင်း တို့ သည် ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။ထို (၂၈) ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား ရှင်အ ပေါင်း တို့ သည် …..
ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေလာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လားကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေအ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲတ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကားကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၂၈)ဆူ ကုန် သောဘု ရား တို့ ၏ တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်
အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိအ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်းတည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံသုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သောအ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သောပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အားအ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော် မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှတန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သောတစ် သောင်း နှစ် ထောင် နစ် ကျိတ် ရှစ်ဆူ ကုန်သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည် ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌ ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင် အ ပေါင်း တို့ သည် …..
ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေလာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လားကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေအ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲတ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကားကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်းတည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံ သုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သောအ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သောပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အားအ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှတန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သောတစ် သောင်း နှစ် ထောင် နစ် ကျိတ် ရှစ်ဆူ ကုန်သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာ ဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည်ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင်အ ပေါင်း တို့ သည် …..
ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေလာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လားကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေအ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲတ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကားကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိအ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်းတည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံသုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သောအ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သောပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အား
အ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
(က) ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ တန် ခိုး တော် အ နန္တ တို့ နှင့် ပြည့် စုံ သည်ဖြစ် ၍ ကမ္ဘာ မြေ မိုး ဖြန်းဖြန်း မိုး ဖြန်းဖြန်း ကျိူး မှတန် ခိုးတော် အနန္တ နှင့် ပြည့် စုံ တော် မူ သော(၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ်စွာဘု ရား ရှင် အပေါင်း တို့ သည်ဤ လူ့ ပြည် ဤ လော က ၌ထင် ရှား ဧ ကန် ပွင့် တော် မူ ကြလေ ကုန် ပြီ ။ထို တစ် သောင်း နှစ် ထောင် နှစ် ကျိတ်ဆူ ကုန်သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘု ရား ရှင်အ ပေါင်း တို့ သည် …..
ဤ သစ္စာ မှန် ကန် ပါ က ဤ မှန် ကန် သော သစ္စာ စကား ကြောင့် သစ္စာ ၏ တန်ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော်ကြောင့် ဘုရား တပည့်တော် / တပည့် တော် မ ဆောင်ရွက် လုပ် ကိုင် နေ သော စီး ပွား ရေး အလုပ် အကိုင်များ အ ရောင်း အ ဝယ် အ လုပ် အ ကိုင် များ ဝင် ငွေလာဘ် လာ ဘ များ အ လုပ် အကိုင် အ ကြံ အ စည်များ တို့ သည် လျင် မြန် စွာ တိုး တက် စည် ကား လာကြ ပါ စေ သ တည်း ။ တစ် နေ့ တစ် ခြား ဒီ ရေ အ လားကဲ့ သို့ စည် စည် ကား ကား တိုး တက် ဝင် ရောက် လာကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။တစ် နေ့ တစ် ခြား တက် နေအ လား ကဲ့ သို့ စီး ပွား ဥစ္စာ ရ တနာ များ ဝင် လာ မ စဲတ သဲ သဲ ရောက် ရှိ လာ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။ဤ ယ ခု့ ဆို ခဲ့ သော မှန် ကန် သော သစ္စာ စ ကားကြောင့် ၎င်း ဆို အပ် ခဲ့ ပြီး သော (၅၁၂၀၂၈)ဆူ ကုန် သော ဗုဒ္ဓ မြတ် စွာ ဘုရား တို့ ၏တန် ခိုး တေ ဇော် အာ နု့ ဘော် ကြောင့်အ ရှေ့နေ ထွက် အနောက် နေ ဝင် တောင် မှာ တံငါကွန် နက္ခတ် မြောက် မှာ ဓူ ဝံ ကြယ် အောက် မှာ အဝီ စိ အ ထက် မှာ အကနိဋ္ဌ ဗြဟ္မာ ဘုံ ဤ အတော အတွင်းတည် ရှိ နေ ထိုင် စောင့် ကြတ် လျက် ရှိ ကြ ပေ ကုန်သော ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာ သုံးပါး သရဏံဂုံသုံး ပါး တို့ ကို ကြည် ညို လေး မြတ် ကြ ပေ ကုန်သောအ လုံး စုံ သော သမ္မာ ဒေဝ နတ် ကောင်း နတ် မြတ် တို့သည် ၎င်း .. သာ သ နာ တော် စောင့် နတ် ကောင်း နတ်မြတ် နတ် ဒေ ဝါ အ ပေါင်း တို့ သည် ၎င်း လျငိ မြန် စွာကြွ ရောက် လာ ကြ ၍ နတ် မင်း ကြီး များ ပိုင် သ သော ပီယ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ်များ ဓန သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များဇေယျ သိဒ္ဓိ အပွင့် ဓာတ် များ ဖြင့် အကျွ်နုပ် တို့ အားအ ထူး ကူ ညီ စောင်မ ကြည့် ရှု စောင့် ရှောက် တော်မူ ကြ ပါ စေ ကုန် သ တည်း ။
မှတ် ချက် …. အ ရောင်း အ ဝယ် စီး ပွား ရေး ကိစ္စ များငွေ ရေး ကြေး ရေး ကိစ္စ များ ဘေး ကြတ် နံ ကြတ် အခက် အခဲ များ အ ဖု့ အ ထစ် များ နှင့် ရင် ဆိုင် နေ ရသော် သူရဿတီ နတ် သမီး အား ကန် တော့ ပွဲဒါ န ပွဲ (၁) ပွဲ ပေး ၍ ဆောင် ရွက် လုပ် ကိုင် ပါ လျှင်ထူး ထူး ခြား ခြား အ ဆင် ပြေ အောင် မြင် လာ ပါလိမ့် မည် ။ ငွေ ရေး ကြေး ရေး ကိစ္စ အရောင်း အဝယ်ကိ စ္စ အ ကြွေး ကိ စ္စ ရ လို မှု့ ကိစ္စ အောင် မြင် လို မှု့ကိ စ္စ များ အ ဆင် ပြေ လာ ပါ လိမ့် မည် ။
ပြီးစီးပါက ပင့်ဖိတ်ကြားထားသော နတ်များအား၎င်းသတ္တဝါ များ အား၎င်း သူတော်ကောင်းအရိယာများအား ၎င်း အမျှပေးဝေရာ၏ ။
အမျှပေးဝေပြီးနောက် မိမိ တက်နိုင်သ၍ မေတ္တာပို့ပေးပါ။ လိုအပ်သော အလိုရှိသောကိစ္စ အကြောင်းအရာအတွက် ဆု့တောင်းပါ ။ဤ အချက် များနှင့်ညီညွတ်အောင် ကျင့်ဆောင်ပါလျှင် သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာ၏ အစွမ်းသတ္တိ ဝင်လာပါတော့သည်။ ဂါထာ အစွမ်းထက်မြတ်လာတော့၏ ။ မိမိဆောင်ရွက်တိုင်း အကျိူးပေးနေတော့သည် ။ နေ့စဉ် ကျင့်ဆောင်ပါလျှင် သြဇာအာဏာကြီးလာပါသည်။ ပြောတိုင်း ဆိုတိုင်း လုပ်တိုင်း ကြံစည်တိုင်း အောင်မြင်လာပါတော့သည်။ ဘေးရန်အန္တရာယ်ကင်းဝေး ပပျောက်ရသည်။ မကောင်းသောအမင်္ဂလာမှန်သမျှ ကင်းဝေးပပျောက်ရ၏ ။ နာနာဘာဝ ဝိနာဘာဝ အဝရုဒ္ဓက နတ်ဆိုး ဘီလူးဆိုးမှန်သမျှကို နိုင်နင်းတော့သည်။ အနာရောဂါ အမျိူးမျိူး ကင်ဆာရောဂါအမျိူးမျိူးပျောက်ကင်း စေနိုင်သည်။
ဤ သ်ု့ကျင့်ဆောင်လာခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်သည် သမ္ဗုဒ္ဓေဂါထာတော်၏ စွမ်းအားသတ္တိ ဝင်ရောက်လာမှု့ကြောင့်ဂါထာစွမ်းအားတက်လာသောကြောင့် ရေကို ကိုင်၍သမ္ဗုဒ္ဓေ ဂါထာတော်ကို ရွတ်လျှင်ရေဆူလာသည်။သံပုရာရည် ရှောက်ရည် တို့ကို ကိုင်၍ ရွတ်ဖတ် လျှင်အချဉ်ဓာတ်ပျောက်၍ အချိူဓာတ်ဖြစ် လာနိုင်တော့၏ ။
ဤ သစ္စာ တော် ခံ ဂါ ထာ ကြီး နှင့် ပက်သတ်လာ လျှင်ဉာဏ် ရှိ သလို အသုံး ချ နိုင် ပါ သည်။စီ ရင် ဆုံး ဖြတ် နိုင် ပါ သည်။ဤ ပြဆို ခဲ့သောနည်း ကို ယူ ၍ မိမိတို အ လို ရှိရာမိမိ တို့ ဖြစ်ချင် ရာကိစ္စ အလိုရှိ ရာ ကို ထည့် သွင်း ဆု့တောင်း နိုင် ပါ သည်။
Credit- ဝေမျှ ကုသိုလ် ယှဉ်ကာယူ နှင့် ပြည့်ဝစေသော အစီအရင်များ